Nagu saabsan - Shuiyuan Teknolojiyadda Tamarta Cusub Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 2000, Shenxian Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd oo ku taal gobolka Shandong, waxaan leenahay taariikh 20 sano ah oo loogu talagalay isku-darka kiimikada wanaagsan, kiimikada kiimikada, wakiilada kaaliyaha kiimikada. Waxaan nahay warshad soo saare oo ku takhasusay soosaarka Dibenzoylmethane (DBM) iyo furfural.The shirkadda hadda shaqeeya 350 shaqaale, oo ay ku jiraan 120 ka qalin jaamacad iyo 21 injineero iyo 5 khubaro dhaqaale.Waxay leedahay afar wershadood laanta, Liaocheng shuiyuan furfural warshad, Juyeluyuan furfural biochemical warshad. , Warshadaha kiimikada ee Shangqiu juyuan iyo Liaocheng shuiyuan soosaarka tikniyoolajiyadda tamarta cusub. Shirkadda farsamada shirkaddu waa mid awood badan, tijaabada macnaheedu waa mid qumman oo qalabka wax soo saarkuna aad u fiican yahay.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah wax soo saarka xirfadeed ee ugu weyn adduunka Dibenzoylmethane (DBM) oo leh awood sanadle ah 10,000 metrik ton, iyada oo ah mid ka mid ah soo saaraha xirfadleyda ugu weyn adduunka furfural lehna awoodda sanadlaha ah 30,000 metrik ton. Waxyaabaha badanaa loo isticmaalo methanol iyo acetic acid ka soo baxa miraha hadhuudhka, oo loo isticmaalo wax soo saarka Dibenzoylmethane iyo furfural, noocyo badan oo adeegsi ah, badanaa loogu talagalay daawada cusbada dhogorta aalkolojiga ah iyo warshadaha kiimikada wanaagsan ee aagagga. Wax soo saarka dabiiciga ah waxaa loo isticmaali karaa soo saarista daawooyinka, aalkolada furfuryl, dhir udgoon, dhadhan, resins iyo alaabooyin kale.
Maxaan inta badan soo saarnaa?
Sidee tahay Saldhigga Waxsoosaarkayagu ?
Waa warshad ka kooban 83,916 mitir laba jibbaaran oo ay ku jiraan 50,000 mitir murabac oo ah aqoon isweydaarsi.Company waxay leedahay in ka badan 350 shaqaale, xoog farsamo xoog leh, waxay leedahay xirfadle ku howlan cilmi baarista wax soo saarka cusub iyo kooxda farsamada horumarinta, iyo wadashaqeyn dhow oo lala yeesho machadyo badan oo cilmi baaris caan ah oo gudaha ah. , Waxaan u hoggaansameynaa fikradda hal-abuurka sayniska iyo farsamada iyo ilaalinta deegaanka ee cusub ee aan sunta ahayn ee PVC kuleyliyaha xasilinta kuleylka Dibenzoylmethane (DBM) iyo furaldehyde iyo wax soo saarka furfural iyo wax soo saarka shirkadda iibka awoodda wax soo saarka sanadlaha ah ee 40,000 tan, shirkaddu waxay leedahay wax soo saarka tikniyoolajiyadda casriga ah. khadadka iyo qalabka wax soo saar ee ugu weyn adduunka ee Dibenzoylmethane (DBM), tayada wax soo saarku waxay gaadhay heer caalami oo heer sare ah.
Fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto emaylkeena:
haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waxaan isku dayi doonaa inaan kaga jawaabno 12 saacadood gudahood.